North Umpqua River King Cabin 15 Kufuphi Crater Lake
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDustin
Iikhabhinethi zeeNtabeni zaseRustic-IGlamping! IiKing Cabins zethu ezithandekayo zibekwe ngokugqibeleleyo ecaleni koMlambo waseMntla we-Umpqua kwiHlathi leSizwe lase-Umpqua. Lo mmandla weOregon Cascades uqhele ukubizwa ngokuba yi "Oregon's Emerald-Jewel Gateway" ukuya eCrater Lake. Sibekwe embindini weNdlela yoMntla ye-Umpqua, eneendlela zokuqhuba ezilula kwiindlela ezininzi, iingxangxasi kunye ne-Umpqua Hot Springs. IiKing Cabins zinebhedi yaseKing, kunye negumbi eliphezulu elinebhedi ephindwe kabini. Indlu yokuhlambela/ishawari ekwabelwana ngayo ikude nezinyuko ukusuka kwiikhabhini.
Sinazo zimbini kwezi King Cabins, iligumbi elinye elikhulu line King size bed kunye neloft ene double bed. Nceda uqaphele ukuba i-loft ifikeleleka ngeleli.
Zonke iikhabhini zigcwele iilinen, imiqamelo, neetawuli zokuhlambela. I-King Cabins inodonga oluxhonywe kwindawo yomlilo ye-LED kunye ne-"JC Woodworks Wine Barrel Creations" Imivalo yesidlo sakusasa kunye nemibono ye-Panther Leap. Zikwabandakanya ubushushu boMbane, iAC, isikhenkcisi esincinci, imicrowave, umenzi wekofu kunye nezinto ezinikezelayo, isixhobo samanzi kunye ne-TV/DVD combo (akukho ntambo okanye TV izise iiDVD okanye sinokukhetha kwiofisi yethu). Nceda uze netawuli yaselwandle ukulungiselela imithombo eshushu okanye imisebenzi yomlambo.
Ikhabhinethi yethu nganye inepaki efana nesetingi kunye neetafile zePiknikhi, iveranda egqunywe ngaphambili, umsesane womlilo, i-Charcoal BBQ (Amalahle kunye neenkuni zomlilo ziyafumaneka kwivenkile yethu) kwaye zibekwe ngaphakathi kwamanyathelo ukusuka kwindawo yokuhlambela epaki eshushu. amagumbi Mens kunye Womens ukuba izitali ezimbini kunye iishawari ezimbini ngalinye linamanzi amaninzi ashushu entabeni umthombo ezikhoyo! Sincoma ukuba ugcwalise iibhotile zakho zamanzi ngamanzi ethu akhazimlayo entaba.
4.94 · Izimvo eziyi-379
I-Umpqua's Last Resort, iWilderness RV Park & Campground imiswe ecaleni koMlambo wase-Umpqua oMantla kunye-kwihlathi leSizwe lase-Umpqua. Lo mmandla weeNtaba zeOregon Cascade udla ngokubizwa ngokuba yi "Oregon's Emerald-Jewel Gateway" kwiCrater Lake National Park. Imibono enomtsalane yomlambo webhastile, ukumila kwentaba-mlilo, amanzi adudumayo, nemisinga emide zisisiqalo nje... uMntla we-Umpqua River ludidi lweHlabathi!
Yazinza kuluntu lwaseDry Creek, iimayile ezingama-27 empuma ye-Idleyld Park [i-Idle-wild Park] kuMlambo wase-Umpqua oMantla, i-Umpqua's Last Resort isingatha iCamper Cabin Rentals, ii-Full Hook-up RV Sites, kunye neeNdawo zeentente.
Lo mmandla ufikeleleka ngokulula kwicandelo elibanzi labemi kwaye ubonelela ngamathuba okuzonwabisa anxulumene nomlambo anje ngemidlalo yamaphenyane angeyomoto, i-whitewater rafting, ukuloba ngeempukane, ukukhwela amatye, i-snorkeling, ukuqubha, ukukhwela ihashe, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile entabeni. , ukufunda ngendalo, kunye nokhenketho olubukekayo. Ababuki zindwendwe bethu abanobubele nabaluncedo banokukunceda ekukhetheni nasekubhubhiseni imisebenzi.
Indlela ebukekayo uHola we-138 usebenza njengeyona ndlela iphambili yokufikelela kwi-Crater Lake National Park, kuMlambo waseMntla we-Umpqua, iimayile ezingama-74 kuMntla we-Umpqua Trail onqumla i-Pacific Crest Trail, kunye nokuZingela iinyamakazi. Abakhenkethi abavela kwihlabathi liphela bahamba ngehlathi leSizwe lase-Umpqua ukonwabela ezi kunye nokuzonwabisa kwangaphandle kunye neendawo zemidlalo. Indlela iRogue-Umpqua Scenic Byway ifumene ingqalelo yesizwe neyengingqi ngomgangatho wayo obalaseleyo wokubukeka kunye nokufikeleleka kuninzi lwamathuba olonwabo nawotoliko aquka ukuxinana okuphezulu kwentloko yentsimbi yomthonyama, iSalmon kunye nempahla yokuloba.
Lo mhlaba wahluke ngokwenene we-canyon ubonakala ngokudityaniswa kwamanzi acocekileyo aluhlaza aluhlaza, amawa amileyo kunye nezigcawu ngaphakathi kwemosaic yamadlelo entaba kunye namahlathi eDouglas-fir/entshona ehemlock. Ukongeza kumgangatho wembonakalo yendalo yoMntla we-Umpqua Wild kunye ne-Scenic Corridor, ziindawo ezininzi ezibalaseleyo ze-geologic ze-columnar basalt, amawa amakhulu e-basalt rock, amatye kunye nezigcawu ezilawulwa njenge-Umpqua Rocks Special Geologic Area. Zimbalwa iinkqubo zemilambo kulo mmandla ziveza ubuninzi bembali yentaba-mlilo kunye neyobume bomhlaba yokuyilwa kweeCascades kwicala elinye eliphantse lithe ngqo, empuma-ntshona. Qiniseka ukuba ujonge i-Natural Hot-springs kunye nokhetho lweengxangxasi zalapha ekhaya, kubandakanya neyona inde yaseMazantsi e-Oregon, iWatson Falls kunye neToketee Falls ehlala idumile, iFall Creek Falls, iSteamboat Falls, kunye neLemolo Falls.
I-Umpqua's Last Resort yindawo yabucala yokuzonwabisa ekhethekileyo kunye nebala lenkampu elibekwe kwindawo eyodwa yabucala kunye-kwihlathi leSizwe lase-Umpqua. Njengomboneleli onebhongo olinganayo wolonwabo siyakubulela ngomdla wakho.
I-Dry Creek Store kunye neSikhululo seGesi sisecaleni kwethu, sinikezela ngenkonzo epheleleyo yezinto zevenkile yelizwe.
Izimvo eziyi-2 455
Abasebenzi bethu abanobuhlobo bakwisiza ngoncedo lwakho. Iofisi yethu ivulwa ngentsimbi yesi-9 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-5 ngokuhlwa yonke imihla. Ukuba kukho into eza kwaye kufuneka ufikelele kumamkeli emva kweeyure, nceda ulandele imiyalelo kumnyango weofisi. Umamkeli-zindwendwe uhlala ekhona ukuze ancede.
Abasebenzi bethu abanobuhlobo bakwisiza ngoncedo lwakho. Iofisi yethu ivulwa ngentsimbi yesi-9 kusasa ukuya ngentsimbi yesi-5 ngokuhlwa yonke imihla. Ukuba kukho into eza kwaye kuf…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Douglas County